IHuawei Yonwabele i-9 Plus kwaye Yonwabela iMax: amanqaku kunye namaxabiso | I-Androidsis
NgoSeptemba ophelileyo, inkxaso-mali kaHuawei Honor yazisa ii-smartphones ezimbini ezintsha, Imbeko 8X kunye 8X Max. Ezi zixhobo zimbini zeza ngokufana okuninzi komnye nomnye, nangona ngokucacileyo i-8X Max, eyeyona nto iphambili kakhulu ekhankanywe kuqala, yeza ivithamini ngakumbi.
Ngoku IHuawei isandula ukubhengeza isibini esitsha seemodeli eziphakathi ehambelana kakhulu kwezi zimbini sele zikhankanyiwe, ke sijamelene neetheminali ezifanayo, kodwa zathiywa igama phantsi kwegama leHuawei nangokwahlulahlula okwahlukileyo. Sithetha ngayo Yonwabela i-9 Plus kwaye uyonwabele iMax. Sibazisa kuwe!
1 IHuawei Yonwabele i-9 Plus
1.1 Ixabiso kunye nokufumaneka kweHuawei Nandipha i-9 Plus
2 IHuawei Yonwabele uMax
2.1 Ixabiso kunye nokufumaneka kweHuawei Nandipha uMax
IHuawei Nandipha i-9 Plus ixhotyiswe nge Iscreen se-IPS LCD ye-6.5-intshi. Le iza nenotshi ethe tyaba ethe tye kwaye ivelise isisombululo se-FullHD + sama-pixels angama-2.340 x 1.080. Yintoni egqithisile, iqinisekisiwe yi-TUV Rheinland, iyenza ikhuseleke emehlweni njengoko icoca imitha eblowu eyingozi ekhutshiweyo.
Ngaphakathi, I-chipset ye-Kirin 710 ikhona. Iyonke, iza ne-4GB ye-RAM kunye ne-64GB yendawo yokugcina yangaphakathi, okanye nge-4GB ye-RAM kunye ne-128GB yokugcina eyakhelweyo. Ukongeza koku, inesikhala sekhadi le-MicroSD sokugcina esongezelelweyo.
Ngakolunye uhlangothi, iza ne-Android 8.1 Oreo phantsi kwesikhumba se-EMUI 8.2 esiza kufakwa kwangaphambili. Kwelinye icala, ixhotyiswe nge-4.000 mAh ibhetri kunye nemilinganiselo ye-162.4 x 77.1 x 8.05 mm. Umva wefowuni ubonakalisa inkqubo yeekhamera ezimbini-zekhamera kunye ne-13-megapixel f / 2 ukuvula. Ngaphambili zimbini i-1.8 MP kunye ne-16 MP yeelensi ezinef / 2 yokuvula.
Ukonwabela i-9 Plus inezixhobo ze- Itekhnoloji ye-audi ye-Histen 5.0 yenkampani. Iskena sokuprintwa kweminwe siyafumaneka ngasemva kwifowuni. Iza nezinto zonxibelelwano ezinje ngenkxaso ye-SIM-mbini, i-4G VoLTE, iWi-Fi 802.11ac, iBluetooth 5.0, i-3.5mm i-jack audio, i-microUSB, kunye neGPS.
Ixabiso kunye nokufumaneka kweHuawei Nandipha i-9 Plus
Iimodeli ze-9 Plus kunye ne-64 GB yokugcina + i-4 GB ye-RAM kunye ne-128 GB yokugcina + i-4 GB ye-RAM ngokulandelelana zithengiswa kwi-1.499 yuan (~ 185 euros) kunye ne-1.699 yuan (~ 210 euros). Ukuthengiswa kwangaphambili kwe-Smartphone sele kuqalile.
I-9GB Yonwabele i-64 Plus iya kufumaneka ukuthengwa ukusukela nge-Okthobha ye-20, ngelixa ukuthengiswa kwe-128GB edition kuya kuqala ukusuka nge-25 ka-Okthobha. Imibala eyahlukileyo ye-smartphone ibandakanya I-Sakura Pink, i-Saphire Blue, i-Magic Night emnyama kunye ne-Aurora color gradient.
IHuawei Yonwabele uMax
IHuawei Yonwabela uMax ixhotyiswe ngomkhulu 7.12 intshi IPS LCD screen. Lo uphethe inotshi yamanzi kwiscreen kwaye ufezekisa isisombululo se-FullHD + sama-pixels angama-2.244 x 1.080. Ikwamkelwe kwakhona yi-TUV Rheinland. Ifowuni ilinganisa i-177.57 x 86.24 x 8.48mm kwaye inobunzima be-210 gram.
Ukonwabela uMax kunikwa amandla yiQualcomm's Snapdragon 660 chipset. Njengo-Enjoy 9 Plus, i-Enjoy Max iza ne-64GB yokugcina + 4GB ye-RAM kunye ne-128GB yokugcina + 4GB ye-RAM. Ifowuni ilayishwe inkqubo yokusebenza ye-Android 8.1 Oreo EMUI 8.2 kwaye ineempawu zekhadi le-MicroSD lokugcina ngakumbi. Ukongeza, inebhetri enkulu ye-5.000 mAh.
Iphaneli yangemuva, egcina isithwebuli somnwe ngeminwe, inenqaku le- Inzwa ye-16-megapixel ene-f / 2.0 ukuvula kunye ne-2-megapixel sensor ene-f / 2.4 ukuvula. Inotshi yasemanzini likhaya elingaphambi kwekhamera ye-8-megapixel, ene-f / 2.0 aperture. Ezinye izinto zefowuni zibandakanya inkxaso yeDolby Atmos, i-Histen 5.0, inkxaso ye-SIM-mbini, i-4G VoLTE, iWi-Fi 802.11ac, iBluetooth 4.2, i-microUSB, i-3.5mm yejack audio kunye neGPS.
Ixabiso kunye nokufumaneka kweHuawei Nandipha uMax
Yonwabela ukwahluka kombala kubandakanya ukhetho lwemibala Isibhakabhaka esimhlophe, uMnyama woMnyama oMnyama kunye no-Amber Brown. I-64GB kunye ne-128GB Yonwabela iimodeli zikaMax zixabiso ngokulandelelana kwi-1.699 yuan (~ 210 euros) kunye ne-1.999 yuan (~ 250 euros).
Ukuthengiswa kwangaphambili kwe-Smartphone kuqalile e-China. I-64GB yokonwabela uMax iya kufumaneka ukuthengwa ukusuka nge-Okthobha ye-20, ngelixa i-128GB eyahlukileyo iya kuthengiswa ukusuka ngo-Novemba 1.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Huawei » I-Huawei Yonwabela i-9 Plus kunye neNwabisa uMax iyabhengezwa: amanqaku, iinkcukacha kunye namaxabiso